Miski Cabdinuur Salal — March 9, 2019
waa maxay dhicis?
Dhicisku waa dhalashada cunnuga,kaasoo aanan gaarin waqtiigi loogu talagalay , haddana aanann ku noolaan Karin meel ka baxsan ilma galeenka Hooyada, waxa ayna dhacdaa badanaa 24 isbuuc ee ugu horeeyso uurka. Halka ilmaha caadiga ah oo waqtigiisa dhameeysta ay ku dhashaan 38 isbuuc .
Haddaba Kaallay Aan Isla Aragnee Wax-yaalaha Sababa Dhiciska :
Infekshanka waxaa uu keeni kara dhicis haddii aan laga daaween hooyada inta ay uurka leedahay.
Hooyada oo qabta cudurka macaanka ama dhiikarka waxa ka qeeyb qaadaan karaan hooyada in ay dhiciso.
Dhibaatooyin la xariira hormoonada (Hormonal problem) .
Noocaa dhiigga hooyada iyo midka cunnuga oo kala nooc noqdo . Tusaalle hooyada dhiiggeeda hadduu yahay O+ cunnugeeda uu noqdo O- , difaaca jirka hooyada waxa uu u fahmaayaa in jirka la soo weeraray maadama uusan aqoonsan , sidaa awgeed waxaa dhacaayo markaas in ay hooyada dhiciso.
Jug xoog leh oo hooyada oga dhacdo caloosha .
Haddaba waa maxay calaamadaha dhiciska?
Dhiigbax inlagu arko hooyada, kasoo ka socdo xubinta taranka (vaginal bleeding)
Hooyada oo dhanka caloosha ka dareento xanuun aad u daran .(Abdominal crumping)
Ilma galeenka oo bilaabo in furmo ( Cervical dilation).
Qoraal yar kuma soo koobi karno dhiciska iyo waxa-yaalaha la xariira, waxa aan kula talin lahaa Bulshadeenna Soomaaliyeed marka hooyada uur yeelato in laga illaali wax-yaalaha culeeska in ay qaado, in hooyada laga daaweeyo infekshanka marka lagu arkaba, hooyada qabta cudur macaanka ama dhiikarka in la siiyo daryeel gaar ah oo mar walbo laga warqabo xaaladdeeda caafimaad. Sidoo kale hooyada Soomaaliyeed waxa aan ugu baaqayaa inta ay uurka ay leedahay in ay badiso booqashada xarumaha caafimaadka.
W/Q: Qoraa / Dr: Miski Cabdinuur Salal
Next post Daruuraha Is-fahan Siyaasadeed Ee Geeska Afrika
Previous post Habdhiska Dheefshiidka 'Diestive system.